पुरानो भद्रगोल कुरेर बस्नुहुनेको लागि खुशीको खबर,भद्रगोल छाडेपछि नयाँ सिरियल ल्याउँदै जिग्री र पाँडे,नाम के होला,अरु कलाकार को को रहलान ?(भिडियो हेर्नुहोस ) – सुदूरखबर डटकम
पुरानो भद्रगोल कुरेर बस्नुहुनेको लागि खुशीको खबर,भद्रगोल छाडेपछि नयाँ सिरियल ल्याउँदै जिग्री र पाँडे,नाम के होला,अरु कलाकार को को रहलान ?(भिडियो हेर्नुहोस )
चर्चित हाँस्यकलाकार तथा भद्रगोलका पूर्व निर्देशकहरु कुमार कट्टेल जिग्री र अर्जुन घिमिरे पाँडेको समूहले अर्को हाँस्य टेलिशृखला नेपाल टेलिभिजनबाट नै प्रसारणमा आउने भएको छ । जुन शृखला जिग्री पाँडे समुहको लगानीमा नै बन्नेछ । जिग्री पाँडेको कम्पनी जेपिटी क्रियसनमार्फत यसको निर्माण हुने नयाँ हाँस्य शृखला असोज २ गतेबाट प्रसाराणमा आउने तयारी छ ।
भ्रदगोलबाट २१ जनाको टिम बाहिरिएपछि प्रसारणमा आएको भद्रगोलले लाइक भन्दा बढी डिसलाइक पाएको अवस्थामा नेपाल टेलिभिजनसँग प्रत्येक विहीबारको समय पाँडे जिग्री समुहले किनिसकेको बताइएको छ । जसमा लेखन तथा निर्देशन जिग्री र पाँडेकै रहने छ भने शृखलाका विषयमा पत्रकार सम्मेलन गरेर जानकारी दिने तयारी गरिएको स्रोतको भनाई छ । भिडियो हेर्नुहोस
बिनोद रानाभाटलाई नेपाल फर्काउन ८२ लाख किन तिर्नु परेन ? सँकलन भएको १ करोड २१ लाख कहाँ छ ? बिनोद रानाभाटले यस्तो भने (भिडियो हेर्नुस)